स्थानिय तह निर्वाचनः काठमाडौं र पोखरामा के होला ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
स्थानिय तह निर्वाचनः काठमाडौं र पोखरामा के होला ?
८ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:०६
कामठाडौं – सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा भागबन्डा गरेसँगै सबैको ध्यान काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकामा केन्द्रित भएको छ। उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समय नजिक आइसक्दा पनि गठबन्धन दलले आफ्ना उम्मेदवार छनोट गरेका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मातहतका कमिटीबाट काठमाडौंसहित ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाका लागि उम्मेदवार सिफारिस भइसकेका छन् । भरतपुर, ललितपुर र वीरगन्ज महानगरपालिकाका लागि भने एकल उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिस उम्मेदवारलाई केन्द्रले अनुमोदन गर्न बाँकी छ। घोषणापत्र निर्माणमा लागेको एमाले मूल नेतृत्वले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा सकेसम्म विवादरहित उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारी गरेको छ। उसले विगतको मत परिणाम र प्रतिस्पर्धी कांग्रेस वा गठबन्धनका सम्भावित उम्मेदवारलाई हेरेर मात्र आफ्ना उम्मेदवार तोक्ने छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।